Ungadla njani ngexesha lokuzila? Iimveliso ezingenakudliwa kwisithuba. Uluhlu lweemveliso ezivunyelwe kwisithuba.
Izixhobo zesondlo esifanelekileyo kwisithuba. Yintoni enokuyenza kunye nento engavunyelwe ukuyidla ngexesha lokuzila ukudla.
Ngoko iLente Elikhulu laqala. Kuya kuhlala iiveki ezisixhenxe kwaye iphelile emva kwecawa i-Easter. Ngeli xesha, umntu okholwayo akayikuzikhawulela kuphela ukutya. Injongo yokuzila ukutya inzulu. Ukuba awungena kwiinkcukacha, eli xesha lingazibonakalisa njengethuba lokuzihlambulula ngokomoya nangokwenyama. Ukutya okhethekileyo kufuneka kuncede umntu abukele ubomi bakhe ngendlela entsha kwaye ahlambulule umzimba.
Ngokutsho kweCawa Charter, iveki yokuqala kunye neyokugqibela yeLente ithathwa njengeyona nto inzima kakhulu. Ukuba uyayilandela ngokuthe ngqo imigaqo, emva kweentsuku zokuqala ezintathu kufuneka ulahleke ngokupheleleyo ukutya. Into kuphela ongayigcina ngayo amandla akho yimifuno eluhlaza kunye namanzi. Kodwa akusiyo wonke umntu onokuphila kulo mlo ixesha elide, ngoko unako ukwandisa uluhlu lokutya uze udle ngokuzeleyo, ungasebenzisi ngokutya ukutya okukhawulezileyo.
Yintoni engadliyo ngokuzila ukutya?
Njengoko sele sithethile, ngexesha leLente Elikhulu kufuneka sigweme kwizinto ezibizwa ngokuba yimveliso esheshayo. Ngokuyinene kukutya okuqukethe amafutha kunye neoli. Kuloluhlu zonke iimveliso zenyama, intlanzi (evunyelwe kwiintsuku ezithile), amaqanda. Ukuvinjelwa kubandakanya zonke iimveliso zobisi.
Yintoni ongayidla kwisithuba
Kwakhona, ngexesha lokuzila umntu kufuneka agweme ukutya okukhawulezayo, iipesele, umgubo omhlophe, ukupheka isonka. Ngaphantsi komnqophiso omkhulu utywala.
Akuyimfuneko ngexesha lesidlo ukudibanisa kwiziqholo ezibukhali. Oku akuyikuvinjelwa, kodwa isincomo soogqirha. Ukususela ekudleni okuncinci okunjalo kunokuchaphazela kakubi imeko yesisu esiswini.
Yintoni ongayidla ngokuzila ukutya?
Imveliso evumelekileyo yinkalo enkulu. Kuzo, unokupheka ezininzi izitya ezicocekileyo, ngoko ke ukutshatyalaliswa kobunqongophala obuninzi bokutya akuncedi. Kubaluleke kakhulu ukutya izitya zokushushu zokuqala, kuba zinemiphumo emihle kwiimeko zesisu namathumbu.
Uluhlu lweemveliso ezivunyelwe kwisithuba:
Isonka (umhlaba ophantsi)
Zonke iziqhamo ngaluphi na uhlobo
Yonke imifuno nayiphi na uhlobo
I-Porridge (ebilisiwe emanzini)
Compote, mors, kvass, smoothies, itiye
Into ongenakuyidla kwisithuba
NgoMvulo, uLwesibini kunye neLwesine unokutya ukutya kwezilwanyana kunye newayini, kodwa nje kuphela.
Kucetyiswa ukuba udle ukutya okubandayo kuphela ngoMsombuluko, ngoLwesithathu noLwesihlanu, kwaye kushushu ngoLwesibili noLwesine. Ngethuba leveki, akuvumelekile ukuba ungeze ioli yeemifuno ekudleni, kuvunyelwe kuphela ngoMgqibelo nangeCawa.
Yintoni ongayidla ngexesha lokuzila
Ungadla njani ngokutya ngokutya nokufumana zonke izinto eziyimfuneko?
Ukususela ngelixesha lokuphumula sibhekana nemingcele ethile, sifanele siyiqwalasele imveliso yethu yokutya kwaye sibandakanye ukutya kwezinye ukutya.
Umntu kufuneka athathe iprotheni kwisixa esithile. Kodwa ekubeni ukutya kunye nemveliso yobisi akuvumelekanga kwisithuba, kunokufumaneka kwiimbotyi, iinqantyambo, okusanhlamvu kunye nemveliso ye-soy.
Ukuba uqhuba ubomi obusebenzayo, qi niseka ukuba udle i-porridge okanye amazambane imihla ngemihla.
Imifuno kunye neziqhamo kufuneka zibe khona kwitafile yakho ngamaxesha onke.
Phuza ubuncinane ii-2 ilitha amanzi ngosuku.
Indawo ethandekayo izithelo ezomileyo nobusi. Oku akukona nje okumnandi, kodwa kunokuba luncedo ngamanye amaxesha.
Ukuxhotyiswa ngeempendulo ezahlukeneyo ekudleni kwakho kwakuninzi.
Emva kokuzila ukutya, buyela ngokukhawuleza ekusebenziseni ukutya okunamafutha. Ukuba udla inyama kakhulu ngosuku lokuqala, unokulimaza umzimba wakho. Yaye khumbula, ukuzila ukutya akukho kuphela okukukho kwisiqhekeza sakho, kodwa oko ucinga ngako. Zama ukuphepha izitenxo ezingekhoyo, amaqela amnandi kunye nokuxabana.
Ukuphumelela ebomini bhinqa elikhangayo
Yintoni efunekayo kwikhwama yezonyakatho emva kwe-40: 4 izilungiso eziza kukunceda ukuba zikhangele omncinci!
Intsingiselo yelizwi elithi "umona" kwingqondo
I-Cantopexy: izibonakaliso, inkqubo, iinkcazo
Indlela yokukholisa umntu ukuba athathe intombazana